Dukaanka Silicone Dolls ee Dukaanka Khadka Tooska ah - 100% Rasmi ah oo Rasmi ah- Urdolls
Caruusadaha galmada Silicone ee iibka cabirka nolosha tayo sare leh
Caruusadaha jinsiga ee silikooniga ah ayaa kaa caawin kara inaad ka adkaato kalinimada. Waxay ku siin karaan faa'iidooyin badan, waxaad dooran kartaa inaad fadhiisato adigoo ku raaxeysanaya khibrada. Khasab kuguma aha inaad xakameyso biyabbax. Waad ku tababbaran kartaa boombalada inta jeer ee aad u baahato inaad noqoto wehel wanaagsan oo aad u diyaar garowdo jacaylka mustaqbalka saaxiibtiina. Waxaad isku dayi kartaa qaabab kala duwan oo waligeed ma caban doonto. Waxay ku siin karaan kalsoonida aad ugu baahan tahay jacaylka, adigoon ku tiirsanayn xaaskaaga / seygaaga ama lammaanahaaga inaad u keento rabitaankaaga galmada meesha ugu sarreysa ee guusha. Laakiin helitaanka caruusad jinsi ah oo silikoon ku habboon waa hawl aad u adag.
Haddii aad raadineyso raaxo heer sare ah silikoon macquul doll jinsi, hambalyo meesha saxda ah. Boombaleyaashayada waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo saamiga dadka dhabta ah. Sababtoo ah heerka sare ee jilitaanka, way adag tahay in la kala sooco qofka dhabta ah. Aad ayaan ugu fiicanahay faahfaahinta howsha, inch kasta oo boombalaha ah waxaa gacanta ku xardhay farshaxan yaqaan xirfadle ah. Maqaarka gacmaha iyo cagaha ayaa sidoo kale si muuqata u muuqda oo aad u macquul ah. Waxyaabaha silikooniga ah ee la isticmaalay waa aamin iyo dhadhan la'aan, waxay leedahay caabbinta kuleylka badan, si fudud uma liidato oo uma jabna, waana sahlan tahay in la nadiifiyo. Waxaan aad u qiimeynaa khibrada macaamiisha. Aqoonsiga macaamilku waa taageeradayada ugu weyn. Ku keenida farxad macaamiisheena ayaa ah awooda aan wadno. Markay gurigaaga timaado, ma niyad jabi doontid. Waxaad ogaan doontaa in tani ay tahay maalgashi weyn.
Qiimaha caruusadeena silikoonku waxyar ayey noqon karaan kuwo qaali ah maxaa yeelay way ka tayo sareeyaan dhamaan waxyaabaha kale. Waxay sidoo kale yihiin kuwo macquul ah oo waara. Tan sidoo kale waxaa aqoonsaday dadka isticmaala badankood, caruusadaha galmada ugu fiican waa inay dareemaan oo ay u ekaadaan sida ugu macquulsan uguna macquulsan. Tayo sare leh caruusadaha jacaylka jacaylku maahan oo keliya inay dadka siiyaan khibrad macquul ah, laakiin sidoo kale waxay gacan ka geystaan ​​badbaadinta nolosha galmada ee dad badan. Waad ku habeyn kartaa lammaanahaaga nolosha dukaankayaga sida waafaqsan dookhaaga.
Haven - Naaso Waaweyn160CM Sexy Beauty Anime Piper Dolls
Alexis - K Cup 150CM Caato Dhexdhexaad Anime Piper Dolls
Kiara - H Cup 160CM Dhexda Khafiifka ah Anime Piper Dolls
Oaklynn - K Cup 150CM Naasaha waaweyn ee Anime Piper Dolls
Juliet - K Cup 150CM Naasaha waaweyn ee Anime Piper Dolls
Gracelynn - Naasaha Waaweyn160CM Sexy Beauty Anime Piper Dolls
Aniyah - Naasaha Waaweyn150CM Naag Qurxoon Anime Piper Dolls
Delaney - Naasaha Waaweyn150CM Sexy Beauty Anime Piper Dolls
Mariah - H Cup 160CM Naasaha waaweyn Anime Piper Dolls
Thea - G Cup 160CM Naasaha waaweyn ee Anime Piper Dolls
Adriana - K Cup 150CM Naasaha waaweyn ee Anime Piper Dolls
Aubrey 161CM G Cup Naasaha Weyn TPE WM Dolls
Ivy 164CM D Koobka TPE WM Dolls Heads
Natalie 168 CM F -Cup Silicone Madaxa Dabiiciga Maqaarka TPE Bady WM Doll
Eliana 168 CM F -Cup Silicone Madaxa Dabiiciga Maqaarka TPE Bady WM Doll
Lucy 165CM E-Cup Silicone Head Dabiiciga Maqaarka TPE WM Doll
Paisley 165 CM F-Cup Maqaarka Maqaarka Silicone WM Doll
Lisa-WM Fat Fat Body qurux badan timo dheer F-cup Big Teits Sexy Adult Doll
Sara - 156CM Qaabka Aasiyaanka Silicone Sex Doll
172CM Motooka Mayumi Pure Silicone Japanese Love Doll Big Naaso
Saafi ah oo soo jiidasho leh Jocelyn Cissie 146cm Doll Silicone for Ragga
Soo iibso caruusadda galmada ee silikoonta nolosha dhabta ah qiimo jaban
Fiidiyow ku saabsan sida loo dayactiro caruusadaha galmada
Caruusadaha dhabta ah waa habka ugu fiican ee lagu sii daayo walbahaarka, ka caawiyo welwelka, kalinimada iyo xitaa niyadjabka
Ka cabashada kalinimada waxay la mid tahay xanuunka jir ahaaneed. Tijaabo ahaan, adeegsiga Tylenol wuxuu yareeyay kalinimada. Kadib qaadashada acetaminophen, baaritaannada shakhsiyaadka cidlada ah waxay muujiyeen hoos u dhac ku yimid aagga xanuunka looga shaqeynayo ee maskaxda. Bayooloji ahaan, caruusadda jinsiga ee Japan ...
Boombaladaadu way fiicantahay
Marka lagu daro labka iyo dheddigga caruusadda galmada, waxay sidoo kale iibisaa qalab si ay caruusaddaadu u fiicnaato oo ay u ekaato si ka wanaagsan. Waxaad heli kartaa madaxyo caruusado jinsi oo dheeri ah, wigyo midabbo kala duwan leh iyo qaybaha jirka ee caruusadda galmada, sida guska kala bixi kara iyo siilka Qalabkan, waxaad kuheli kartaa se ...
Caruusadaha dhabta ah waxay u egyihiin jilayaasha nolosha dhabta ah
Haddii aadan lacag badan ku qarashgareyn doonin, ka dib u iibso caruusadda galmada ee nolosha ka raqiisan uguna xiisaha badan Weli waxaa jira noocyo badan, oo badanaa way muuqdaan. Haddii aad runtii rabto inaad astaysto, markaa tani dhab ahaan waa xulasho wanaagsan. Iyada oo ay ku dheehan tahay qaab nololeedkan 'Doll Doll', waxaad dareemi doontaa mid aad u deggan ...